Péléသည် Maradona ၏မွေးနေ့အတွက်ရွေ့လျားစာတစ်စောင်ပို့သည်
By နေပြည်တော် နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ် နိုဝင်ဘာ 2, 2020
သူမ၏မွေးနေ့ဖြစ်သည့်အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်သောကြာနေ့တွင်မာရာဒွန်သည်သူမ၏“ သူငယ်ချင်းကောင်း” ပေလီထံမှဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည်။ ဘရာဇီးလ်ဒဏ္Diegoာရီတွင် Diego Armando သည်သူ၏ထောက်ခံမှုကိုအမြဲရရှိလိမ့်မည်ဟုလည်းဖော်ပြထားသည်။
“ သူငယ်ချင်းကောင်း Maradona ။ အစဉ်မပြတ်သင်တို့ကိုငါချီးကျူးပါလိမ့်မယ် အစဉ်မပြတ်ငါမစမည်။ ခရီးရှည်ကြီးဖြစ်ပါစေ အမြဲ ပြုံးပါ၊ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့! ", ၂၀ ရာစု၏အကောင်းဆုံးကစားသမား FIFA မှစဉ်းစားသောဘရာဇီးကြယ်ပွင့်ကိုရေးခဲ့သည်။
ပေါ်တူဂီနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ဖြင့်ရေးသားထားသောထိုစာတွင်ဝတ်စုံဝတ်ထားသည့်Peléပေါ်လာသည့်ဓာတ်ပုံနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။ ညှစ် ၁၉၉၀ ကမ္ဘာ့ဖလားအီတလီနိုင်ငံတွင်albicélesteကိုဝတ်ဆင်ထားသောအာဂျင်တီးနားကြယ်ပွင့်၏လက်။
အတန်ကြာသော်မာရာဒိုးသည်ဘရာဇီးဒဏ္legာရီမှဤလှပသောသတင်းစကားကိုအတိုချုပ်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ "အိုရီး (ဘုရင်)" ပထမ ဦး ဆုံးပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည် မာရာဒိုနာ ဘရာဇီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲPélé၏အထိမ်းအမှတ်အမှတ်အသားဖြင့်သူ့ကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည် -
“ ကျွန်တော်ဒီစကြဝuniversalာကိုးကွယ်မှုကိုပျော်ရွှင်ချင်ပါတယ်၊ နှစ် ၈၀ သက်တမ်းရှိ Rey Pelé !!! ", ကပြောပါတယ် Maradona ။
ဒီနေ့သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်၊ Maradona သည်၎င်း၏ ၆၀ ဖယောင်းတိုင်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်သည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာ https://www.afrikmag.com/ann anniversaire-de-maradona-pele-lui-adresse-un-message-emouvant
The Daily Dose - ဂျွန်နီ Depp - ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းရုပ်သံလိုင်း
အားကစား - နို ၀ င်ဘာလအတွက် CANAL + ၏အဓိကအဖြစ်အပျက်များဖြစ်သည် လွန်ခဲ့သော3ပတ်က
[…] ၎င်း၏သုံးစွဲသူများကိုပိုမိုတန်ဖိုးထားရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ ရုပ်ရှင်ရုံအစီအစဉ်များမှသည်အားကစားအထိနေ့ရက်တိုင်းသည်ပန်းစည်းနှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားမှုများစွာရှိလိမ့်မည်ဟုကတိပြုသည်။